Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Gumaysiga Itoobiya oo Magaalada Tiyeegloow ee Dalka Soomaaliya Laga Qabsaday
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya oo Magaalada Tiyeegloow ee Dalka Soomaaliya Laga Qabsaday
Wararka ka imanaya magaalada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ay gabi ahaanba iskaga baxeen ciidamadii Gumaysiga Itoobiya oo qeyb ka ah howl galka AMISOM.
Sidii aad wararkaanigii hore kula socoteen Ciidanka Gumaysiga Itoobiya oo kala shaki iyo niyad-jab xoog leh ay lasoo daristay kacdoonka gudaha Itoobiya kasocda awgii ayaa khasaare laxaad leh uu kasoo gaadhay dagaalada ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay u baxeen dhanka degmada Xudur ee isla gobolka Bakool ee maamulka Koofur Galbeed ee dalka Soomaaliya.
Waxaa kamid ah saldhigyada laga qabsaday Ciidanka Woyaanaha Ceel Cali, Moqokori, iyo Halgan ee gobolka Hiiraan. Dhinaca gobolka Bakool waxaa kamid ah deegaanada laga qabsaday Rabdhuure, Buur-dhuxunle, iyo Garasweyne. Sidoo kale gobolka Galgaduud waxay iskaga baxeen deegaanada kala ah Budbud iyo Galcad.
Waxaa xusid mudan in Magaalada Tiyeeglow ay tahay magaalo istiraatiiji ah, iyadoo isku xidha gobolada Hiiraan iyo Bakool, qiyaastii 90 KM waxay u jirtaa magaalada Xudur, sidoo kale waxay 140 KM u jirtaa magaala Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.